Abafazi mabazithobele amadoda
Omnye umba oye waba ngumfowuni omkhulu kubagxeki be-Southern Baptist Convention kuye kwaba sengqondo yabo kunye nokunyangwa kwabasetyhini. Kwintlanganiso ye-1998 bahlaziya i-Faith and Message Message yeBaptisti ukuba bathi abafazi mabazithobele amadoda abo. Ngo-2000, baphumelela imithetho yokukhusela abafazi ekusebenzeni njengomfundisi. Oku kuye kwabenza baphume kwiinkonzo ezininzi zamaProthestani.
Ubungenani abathunywa abayi-8 000 beye kwiNgqungquthela ye-Southern Baptist Convention yesi-141 eSalt Lake City, e-Utah ngo-1998.
Ingqungquthela yeso sibano yonyaka yayiyi-Revised Faith Faith and Message - yokuqala yabhalwa ngo-1925 kwaye yabhalwa kwakhona ngowe-1963. Utshintsho olwamkelwe ngo-Juni 9 lwaluphelela kwiminyaka engama-20 + yokubambisana okugcinayo kwiseca laseNashville.
Umbhalo wenguqu yeSiqendu 18 seTrust Baptist and Message "
UThixo uye wamisela intsapho njengeziko elisekelwe kuluntu. Yakhiwa ngabantu abadibeneyo ngomtshato, igazi, okanye ukutholwa.
Umtshato kukudibanisa indoda enye kunye nomfazi omnye ekuzibophelelweni komnqophiso wokuphila. Isipho esiyingqayizivele sikaThixo sokutyhila umanyano phakathi kukaKristu kunye necawa yakhe, kunye nokubonelela indoda kunye nomfazi ekutshatweni kweso sikhokelo sobudlelwane obusondeleyo, isitishi sokuthetha ngokwezesondo ngokwemiqathango yeBhayibhile kunye neendlela zokuzala umntu uhlanga.
Indoda nomfazi banokulingana phambi koThixo, kuba zombini zidalwe ngomfanekiso kaThixo. Ubuhlobo bomtshato bubonisa indlela uThixo ahlobene ngayo nabantu bakhe. Umyeni ukuthanda umfazi wakhe njengoko uKristu walithanda ibandla. Unomthwalo onikwe nguThixo ukubonelela, ukukhusela, nokukhokela intsapho yakhe. Umfazi ukuzithoba ngokunyanisekileyo kubunkokeli benkokheli yomyeni wakhe njengoko icawa inokuzithoba ngokuzithandela kubuntloko bukaKristu. Yena, emfanekisweni kaThixo njengendoda yakhe kwaye ngokulinganayo alingana naye, unembopheleleko enikwe nguThixo ukuhlonela umyeni wakhe nokukhonza njengomncedisi wakhe ekulawuleni indlu kunye nokukhuthaza isizukulwana esilandelayo.
Abantwana, ukususela ngexesha lokukhulelwa, kuyintsikelelo kunye nelifa elivela eNkosini. Abazali kufuneka babonise abantwana babo umzekelo womtshato. Abazali kufuneka bafundise abantwana babo ngokomoya nangokwemilinganiselo yokuziphatha baze baholele, ngokumelana nomzekelo wokuphila kunye nokuziphatha okuthandwayo, ukwenza ukhetho olusekelwe kwinyaniso yeBhayibhile. Abantwana bafanele bahloniphe baze baphulaphule abazali babo.
Utshintsho lwafunyanwa kwiindinyana ezimbini kwincwadi yeTestamente eNtsha yama-Efese:
Bafazi, thobelani nabayeni benu njengoko niya eNkosini. Kuba indoda yintloko yowomfazi njengokuba uKristu uyiNtloko yebandla, umzimba onguMsindisi. (Efese 5: 22-23)
Bantwana, thobele abazali bakho eNkosini, kuba oku kulungile. Hlonipha uyihlo nonina-lo ngumyalelo wokuqala onesithembiso: ukuze kube kuhle kuwe kwaye uhlale ixesha elide emhlabeni. Yaye, bobawo, ningabathukutheli abantwana benu, kodwa nibavuselele ekuqeqesheni nasekufundisweni kweNkosi. (Efese 6: 1-4)
Ukugqithiswa ngokugqithisileyo kwakukho ezinye izilungiso ezimbini ezibiza amadoda kunye nabafazi ukuba bangenise omnye komnye kwaye babeza kubandakanya abahlolokazi, abahlolokazi kunye nabantu abangabodwa njengamazwi "entsapho." Kubonakala ukuba amadoda aseBaptisti ayithandi ingcamango yokwenza nayiphi na uhlobo isenzo sokungeniswa kwabafazi babo.
Kuthiwani ngabahlolokazi nabahlolokazi - umntu okhishwe ngaphandle kwentsapho xa umlingane wakhe efa? Ngaba umtshato unelungelo elikhulu lokuba wonke umntu ongaphambi komtshato nomntu osemva komtshato angafakwa ngaphandle kwenkcazo "yentsapho"? Akunangqondo. Ubume bokuba yintoni intsapho ayinikezwa nguThixo kodwa yenziwe yinkcubeko.
Iingcaciso zethu ziye zatshintsha ngokuhamba kwexesha, mhlawumbi zibe ngcono.
Akumangalisi ukuba iindinyana zeBhayibhile ezahlukahlukeneyo zazinganyanzelwanga ngokukodwa ekudalweni kwesi sigqibo esitsha senjongo. Ngokomzekelo, isahluko sesi-6 se-Efese silandelwa ngokukhawuleza enye indinyana eye isetyenziselwa ukulinganisa ubukhoboka kunye nobudlelwane bobukhulu ngokubanzi: "Zi khoboka, thobela abaphathi bakho basemhlabeni ngoyika kunye nokuthuthumela, ngokungabhinqa kwentliziyo, njengoko uthobela uKristu . "AmaBaptisti aseMazantsi, ngokuthakazelisayo, ahluke kwicawa yaseBhaptizi malunga nombandela wobukhoboka. Baye baphikisana nokuhlukana kwee-1960.
UDuteronomi 22: 23-4 uthi: "Ukuba kukho intombi, intombazana sele isingenele ukuba isatshatile, kwaye indoda idibana nayo edolophini ize ilale naye, wobazisa bobabini kwisango laloo dolophu kwaye bawabethe ngamatye, loo nto ibhinqa ngenxa yokuba engakhange amemele edolophini kunye nomntu ngenxa yokuba waphula ummelwane wommelwane wakhe.
Ngoko uya kucoca ububi phakathi kwakho. "Ndiyazibuza ukuba utshintsho olunjalo kwimithetho yokudlwengulwa yinto eyoyibiza kuyo kwiminyaka ezayo?
«AbaBaptisti nabaseBaptist abaMzantsi | Abafazi Abayi Kufundisa? »I
Akunelisekanga ukunciphisa inxaxheba yabesifazane ekhaya nasemtshatweni njengokuba benza ngexesha lomhlangano we-1998, iSouth Baptist Baptist Convention iye yazama ukuqinisekisa ukuba abafazi abadlala indima ebalulekileyo kwimicimbi yonqulo. Ngomhlangano we-2000 babedlulisa imithetho emitsha ukuba abafazi mabamele bangabasebenzi njengabafundisi.
Kutheni bathatha le nyathelo elidlulileyo-into enqabileyo phakathi kwezinkolo zamaProthestani namhlanje?
NgokweNtshumayelo uArian Rogers waseMemfis, Tennessee, usihlalo wekomiti yoyilo, "Nangona amadoda kunye nabasetyhini banikezwa ... i-ofisi yomfundisi isalathiselwe abantu ngesibhalo." Ngoko ke ngo-1998 abafazi babenqatshelwe ukuba zabo iintsapho kwaye ngo-2000 baphinde banqatshelwe ilungelo lokubamba iinkokheli zabo kwiicawa.
Ukholo noTshintsho lomyalezo aluzange luqwalasele ukuba ngaba ngabafazi kufuneka baqeshwe, kuphela kuphela ukuba ngaba ngabafundisi abakhokela amabandla. Utshintsho aluzange luchaze okokufuneka kwenzeke kuba-1,600 okanye ngabafundisi be-Baptist babaseMaspala ababekho ngelo xesha, malunga ne-100 kubo ababekhokela amabandla.
Ngenxa yokugxininiswa kweBaptisti yendabuko ngokuzimela kwamasonto ngamanye kunye nokuba i-Southern Baptist Convention iyinxalenye yenyunyana yebandla ngaphezu kwehlelo lokuzikhethela, inguqu yayingabikho kwiBaptisti nganye yaseMaspala kunye namaziko angama-41,000 asekuhlaleni ahlala ekhululekile ukuba amisele bafazi kwaye baqeshe njengabafundisi.
Sekunjalo, into yokuba utshintsho lwenziwa bonke bathumela isigidimi esinamandla kwaye lenzelwe ukuchaphazela izigqibo kumgangatho webandla.
Kuyinyaniso ukuba olu tshintsho lwalusekelwe kwiingxelo ezifumaneka eBhayibhileni, ngoko kuya kungafaneleka ukubiza ezi ndawo "ezingabonakaliyo." Noko ke, kuzo zombini iimeko, zange zihoxise okanye zigatye iindinyana ezingakhokelela kwizigqibo ezichasene nazo.
Nangona amaBaptisti aseMazantsi athi bangenayo i-inerrantists, abayiyo ngokwenene-bayabakhetha ngokukhethayo. Bakhetha ezinye iindinyana ukuze baphathe njengento engenamdla kunye noqobo, kodwa kungabikho abanye.
Oku kucacile kwingxabano yamaBaptisti aseMzantsi malunga nokulungiswa kwabasetyhini. Inqaku elifanelekileyo likuTimoti 2:11: "Andivumeli bani umfazi ukuba afundise okanye abe negunya phezu kwamadoda; ufanele athule. "" I-inerrantist "ithatha le ndinyana ibe yinyaniso engunaphakade, inyaniso yonke.
KuTimoti 2: 8 uthi: "Abasetyhini bafanele bazihlobise ngokuthobeka nangengqiqo kwinqaba ebonakalayo, kungekhona ngeenwele eziboyiweyo okanye igolide okanye iiparele okanye iingubo ezibiza." Ngaba i-inerrantist ihlutha iingubo zamabhinqa kwindlu yecawa kwaye ingabikhoyiki iinwele zayo? Ngaphandle. Bakhetha kunye nokukhetha ukuba yiyiphi imilayezo "engenayo" efuna ukuyilandela nokunyanzelisa
Ababonakali ukuba balandele ngokuqhubekayo iindinyana abazibango kufuneka zilandelwe, ngokomzekelo okukhankanywe ngasentla i-Timoti 2:11. Ngokuqinisekileyo bavumela abafazi ukuba bafundise iSonto leSonto, bacule kwi-choir, bathethe kwiintlanganiso. Inyaniso yolu mbandela kukuba, bakhetha kakhulu indlela bazama ngayo ukusebenzisa le "vesi" yevesi.
I-inerrantists ithi iBhayibhile "impendulo egunyazisiweyo" kwimibandela enjengaleyo indima yabasetyhini kwintsapho nakwiintsapho, kodwa oku akunjalo ngokupheleleyo.
Esikhundleni saloo ndlela, balandela igunya eliphezulu: isimo sengqondo ngesini malunga nabasetyhini abasenza isicatshulwa ukuze banike isisombululo sikaThixo ngesini. Ngaba ingxaki yabo ngokulungiswa kwabafazi? Hayi, ingxaki yabo ininzi nabasetyhini ngokwabo.
Umongameli we-SBC owayengumongameli we-SBC, wenza ezinye iingxelo xa exelela abafazi ukuba bazithobe kumadoda abo "njengokungathi unguThixo." USmith wongezelela ukuba xa umfazi ehluleka ukuhlangabezana neemfuno zesondo zomyeni wakhe, unecala lokuba engathembekanga kuye. Injongo yalezi zimeko ezibonakalayo zibonakala zilawulwa ngabasetyhini - kwiNgqungquthela yaseMbhaptizi yase-Southern, nasebandleni nasekhaya.
Umnqweno wabo wokulawula awupheli kunye nabasetyhini, into ebonakaliswe yizenzo zabo zezopolitiko kunye nokuzama ukunyanzelisa abanye ukuba baphile ngamakhowudi abo. Sibona oku kwiziphakamiso zokuthumela iMithetho Eyishumi kwizakhiwo zikaRhulumente, kwimithetho yomthandazo wesikolo , nangaphezulu.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngazo zonke izigqibo ezenzayo, zihambela phambili kwaye zihamba kude nokuba kuthetha ntoni ukuba ngumBhaptizi. Ngokomgaqo weBhaptizi, ngamnye umntu unako ukulinganisa izibhalo ngokwawo. Ngaloo ndlela, kufuneka ukuba yinto encinane kakhulu "imfundiso esemthethweni." Le yeso esinye sezizathu zokuba abanye amaBaptisti abachasa ukongeza kwesibhengezo sokuba amabhinqa kufuneka angenise kubayeni bawo. Ngokwenkolelo yamaBaptisti, kufuneka kube ngabanye ukuba banqume indima yabasetyhini, kungekhona ubuholi be-SBC.
I-SBC igcina ingeza kwiNkcazo yokholo, "imfundiso esemthethweni" yehlelo; kodwa xa bongeza, bangaphantsi bahamba baye kwisigqibo ngabodwa. Ingaba bahamba kangakanani ekungenizeni i-dogma nokuthatha amandla abantu ukuba batyhicile ngokwabo kwaye basenokuthi banokuthi bathi "iBaptisti?"
«Abafazi mabazithobele amadoda Ukuphendula "
AmaKristu angqinekile kwinto ephumayo kwiSouth Baptist Baptist Convention. Amaninzi amaninzi amaProtestanti avumela abafazi ukuba banendima kwimicimbi yecawa, benqabe ukuthatha umyalelo weBhayibhile ukuba abafazi mabangabi negunya kwaye bafanele bazithobele amadoda abo. I-Southern Baptist Convention ayikho inyathelo kunye noluntu lwaseMelika kunye namaProtestanti aseMerika.
Iinkokheli zeZizwe eziManyeneyo zikaKristu, ezinamalungu ayizigidi ezi-1.5 kwiibandla ezingaphezu kwama-6,000 ziye zavakalisa ukwethuka okukhulu kwezi bhengezo.
UMongameli uPaul Sherry, umongameli we-UCC e-Cleveland-esekelwe kwi-UCC, wathi kubathengi "Ngenhlonipho yonke, indibaniso iyindawo engafanelekanga kwimbali kwaye, ndiyakholelwa, kude nxamnye nesigidimi seVangeli."
UMongameli uLois Powell, umlawuli oyintloko weziko le-UCC lokuQinisekisa kwabaseTyhini, uthe "Le ngxelo ayibonakali kwiphandle, kodwa njengendlela yokwenza unqulo lokwenzela ukuhlaziya isithethe ngokuhambelana nokuchazwa kwayo. "Kungenjalo, ukuba amaBaptisti aseMazantsi ayengabalulekanga kwimbono yowesifazane kuphela kulo mbandela. Ndiyabuza ukuba ngaba baya kumbona njengaluphi na uhlobo lolawulo lwezenkolo / ngokomoya?
Kwaye kwakhiwa iSonto LamaKatolika eliqhelekileyo lokuba libonakala liphantse. UFrank Ruff, umbingeleli wamaRoma Katolika osebenza ngokubambisana namaBaptist aseMazantsi kwiNgqungquthela yeeNgqobhoko zamaKatolika uye wakhathazeka ngenxa yenguqu kwaye ucebise ukuba kuya kuphelisa ukulimaza imizamo yabo yokushumayela.
Ngomnyaka we-1993, inkomfa yombhishophu yanikela incwadi yabo yoobufundisi, nangona bevuma ukungafani kwimiba yomtshato, bambiza ukuba "ukuzithobela ngokubambisana, kungabikho ngongoma-mlingane" njengento "engundoqo kwinjabulo yangempela."
UMaxine Hanks, umbhali waseMormon kunye nomlobi wesifazane, watshela abaphephandaba ukuba "Le ngcamango yabasetyhini iyazithobela igunya lendoda ikhuselekile kwaye ikhusela lawa maqumrhu ukuba aguquke kwiindawo ezibonakalayo zobuKristu abathi bathi" Andizi apho ukhona, kodwa andisayi kubona ubukhokeli baseMbhaptizi aseMzantsi bayibeka ibango lokuba naluphi na uhlobo "lokukhanya okukhanyisiweyo." Iinjongo zabo zibonakala zininzi malunga neenkcukacha zentlalo zasendulo kunye neendlela ezingapheliyo zobudlelwane boluntu.
Uninzi lwabasetyhini bamaBhaptizi, kubonakala ngathi luthatha le nto. Ndiqinisekile ukuba izigidi zabantu abaye kwiintlanganiso zeeNtlondi zeZithembiso zazingakhathazeki ukubuza iimpendulo zabafazi babo ngaphambi kokuhamba. UMary Mohler, owakha indlu yaseKentucky kunye nelungu lekomiti ebhala ezinye iinguqulelo, wathi igama elithi "ngenisa" lingahle lithandwe, "kodwa lizwi elichanekileyo yeBhayibhile kwaye yilokho kubalulekayo. Ndizithobela ubunkokheli bomyeni wam ekhayeni lethu, kungekhona ngenxa yokuyalelwa ngu-Al Mohler, kodwa kuba ngumyalelo ovela kuThixo onamandla onke kum njengowesifazane ongumKristu. "
Ngaba loo nto iyathuthuzelayo ? Abantu babesetyenziselwa ukuqwalasela igunya lookumkani kunye nobulungisa bobukhoboka lokuba "ngumyalelo ovela kuThixo onamandla onke" nakumaKristu. Ubukhoboka, wamkela ngokuzithandela kwaye ugunyaziswe nguthixo, usengumakhoboka.
Le ntshutshiso malunga nabasetyhini akuyinto into eyenziwa ngamalungu ngobunkokeli obungacingiyo. Kunoko, into ekwabelwana ngamanani amaninzi aseMaptist aseMzantsi kunye nemiphumo yaso sele ibonakala. EWaco, eTexas kwakukho iingxelo ze-tussles kunye nokuqhankqalaza ngokutyunjwa kwebhinqa njengomfundisi ophezulu kwibandla laseBhaptizi. Umntu omkhulu owakhankqalaza wabantu abaqhankqalazi bendoda (intshabalalo enkulu) behlangene ngaphandle kwecawa kwaye indoda enye yathi kubathwali "Sivele sikholelwa ukuba indawo yabasetyhini ihlala ekhaya, kwaye ngokuqinisekileyo, endlwini kaNdikhoyo, akanayo indawo yokuncedisa. "U
Iimpawu ezibonisa iimvakalelo ezifanayo zabonakala phakathi kwababhikishi. Phakathi kwemiyalezo kwakukho "Abafazi abanalo igunya" kunye "Abasebenzi basetyhini abalinganayo nokuziphatha okubi; Oomama osebenzayo balingana nokuxhaphazwa kwabantwana. "UJulie Pennington-uRussell, owayeza kuba ngowalusi wesibini oyintloko wesonto kwibaphi na iBandla laseBastile eTexas, wayefuduke esuka eSan Francisco apho abantu babenelungelo lokunyamezela. Abanye babingelela, akunjalo?
"Abafazi abayikufundisa? | AbaBaptisti namaBaptisti aseMzantsi »
Ingaba Ukuziphendukela Kwemvelo Kuhlangabezana Neengqinisiso ZeNzululwazi Yezesayensi
Ukuchaza iSayensi - njani iSayensi ichazwe?
Iifoto zeeNtsapho - Imifanekiso
5 I-Elf Movie Quotes: I-Buddy I-Adorable Teaches You How to Love Life
Iingcali zeMveli kunye neMithetho
10 I-Dinosaurs Eyaziwayo Eyaziwayo ezazingekho Triceratops
I-Spooling Up With Line Enough Fishing Line
Iincwadi ezibhekiselele kuzo zonke iziKhemishini kufuneka zifumane